10-KA SARE EE AFRICA: Waa kuwee 10-ka Ciyaaryahan ee ugu mushaarka badan Africa! | Gool FM	Wednesday, February 10th, 2016	Home
10-KA SARE EE AFRICA: Waa kuwee 10-ka Ciyaaryahan ee ugu mushaarka badan Africa!
Published on December 6, 2012 by BYare
Khamiis, 06-12-2012. Waxaa la is waydiiyay ciyaartoyda ugu mushaarka badan qaaradeena Africa, waxaan isku taxalujinay oo inoo suuro gashay inaan idin soo ururino 10-ka ciyaaryahan ee ugu mushaarka badan Africa haddaba hoos ka eeg.
Eto’o ayaa iminka u ciyaara naadiga reer Russia ee Anzhi Makhachkala waxa uuna yahay ciyaaryahanka ugu mushaarka badan Africa sheekadu intaa kaliya kuma ekee wuxuu kaloo yahay ciyaaryahanka adduunka ugu mushaarka badan
Wuxuu qaataa sanadiiba 20-milyan oo euro marka laga saaro lacagaha canshuuraha looga qaato, waxa uuna u saftay xulkiisa Cameroon 110-kulan wuxuuna u dhaliyay 53-gool.
Xiddigan ayaa iminka u safta Man City wuxuuna ahaa ninka ugu mushaarka badan ciyaartoyda Africa ka hor inta uusan Eto’o ku biirin naadiga Anzhi Makhachkala.
Yaya ayaa iminka sanadiiba mushaar ahaan u qaata 15-milyan oo Euro.
Ninka ay wali qalbiga ku hayaan taageerayaasha Chelsea Didier Drogba ayaa iminka u ciyaara kooxda Shanghai Shenhua ee ka dhisan Shiinaha isagoo mushaar ahaan sanadiiba kaga qaata 12.9-milyan oo euro.
Keita ayaa iminka u ciyaaara kooxda Dalian Aerbin F.C ee dalka Shiinaha, wuxuuna sanadiiba mushaar ahaan kaga qaataa 12-milyan oo bound.
Adebayor ayaa iminka u ciyaara kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska, inkastoo gursiga keydka kaga jiro haddana waxa uu mushaar ahaan kaga qaataa sanadiiba adduun dhan 10-milyan oo euro.
Inkastoo Kolo tan iyo markii uu ku biiray kooxda Man City ee dalka Ingiriiska uusan kulama badan ka soo dhex muuqan misane wuxuu sanadiiba u qaataa mushaar ahaan adduun dhan 5.8-milyan oo euro.
Christopher Samba (Congo)
Daafacan iminka u ciyaara kooxda Anzhi Makhachkala ee dalka Ruushka ayaa markii hore weerar kaga ciyaari jiray kooxda Blackburn Rovers ee dalka Ingiriiska isagoo 16-gool u dhaliyay 161-kulan uu u saftay, balse markii dambe daafac noqday wuxuuna mushaar ahaan kaga qaataa kooxda Anzhi adduun dhan 5.5-milyan sanadiiba.
Xiddiga heysta diinteena Islaamka eee Kanoute ayaa haatan u safta kooxda Beijing Guoan ee dalka Shiinaha waxaana la sheegayaa in mushaar ahaan u qaato sanadiiba 6.2-milyan oo bound.
Xiddigan ayaa waxaa iska dhalay aabe Mali ah iyo hooyo ka soo jeeda dalka Faransiiska.
Essien ee qadka dhexe kaga ciyaara Chelsea ayaa waxa uu amaah ahaan ugu joogaa iminka kooxda Real Madrid ee dalka Spain, waxa uuna mushaar ahaan u qaataa sanadiiba 5.1-milyan oo euro.
Mikel John Obi (Nigeria)
Obi ayaa isagu dhawaan heshiis cusub la saxiixday kooxdiisa Chelsea waxa uu markiisii hore intuusan ku soo biirin Chelsea ku sigtay inuu u ciyaaro Man United ayaa waxa uu isna sanadiiba mushaar ahaan u qaataa aduun dhan 4.5-milyan oo euro.
Wararka	Shanghai Shenhua oo laba jibaartay wada hadalada ay ku doonayso Loic Remy!
(London) 10 Feb 2016 Kooxda dalka shiinaha ee Shanghai ...	SIR FAKATAY: Qodobadda heshiiska dhex maray Man United iyo Jose Mourinho oo la jabsaday deedna la soo bandhigay
(Manchester) 10 Feb 2016. Jariiradda ka soo baxdda ...	Tomas Rosicky oo shaaciyay magacyada laba laacib oo horyaalka u qaadi kara Arsenal!
(London) 10 Feb 2016 Laacibka kooxda Arsenal dhaawaca uga ...	Taageero u muuji caruurta Soomaaliyeed iyo kuwa walaalaha dariska ee Djibouti oo qeyb ka ah Koobka Jeem ee lagu qabanayo Qatar….(EEG group-yada ay ku jiraan iyo dhibacaha ay heystaan ilaa iminka)+SAWIRRO
(Doha) 10 Feb 2016. Koobka Jeem ee kubbadda ...	Labada Manchester oo ku loolamaya saxiixa laacibka kooxda Barcelona ee Neymar (Yaa ku adkaan kara?)
(Manchester) 10 Feb 2016 The Sun ayaa daabacday in ...	Markii hore Cawska! Hadana Ciidda! Real Maddrid oo furi la Xujadda Gareth Bale. Maxay kula tahay?
(Madrid) 10 Feb 2016. Bale waxa uu ololahan ...	Massimiliano Allegri oo ka hadlay shaqada kooxda Chelsea(Muxuu ka yiri?)
(Turin) 10 Feb 2016 Tababaraha kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa ...	XOG: Milan oo horraanba la heshiisey Anwar El Ghazi & madaxwaynaha River Plate oo xaqiijiyay in Vangioni uu Milan ku biiri doono
(Milano) 10 Feb 2016 - Kooxda Rossoneri ayaa ...	Chelsea oo xagaaga xidiggo badan xaraashaysa!
(London) 10 Feb 2016 - Chelsea ayaa sida ...	30-ka gool uu Cristiano Ronaldo u dhaliyay Real Madrid xilli ciyaareedkan oo dhan waa ‘Hal Bacaad lagu lisay’…(Aqriso warbixin kaa yaabin doonta)
(Madrid) 10 Feb 2016. Markii ugu horreysay tan ...	GoolFM Mobile (USA)	About usContactsWaxaan NahayNagala Soo Xiriir	Copyright © Gool FM 2016. All Rights Reserved. Hosted By Afro